COVID-19 ဘေးကြောင့် Esports ပြိုင်ပွဲတွေအားလုံး ရပ်တန့်သွားလို့ ပွဲကြည့်စရာမရှိတဲ့သူတွေအတွက် Dota2ပွဲကြည့်ရင်း ပါဝင်ကူညီနိုင်ပါပြီ။
ESL One Los Angeles Major သာမက EPICENTER Major ကိုပါ Valve က ဖျက်သိမ်းသွားတာကြောင့် ကြားထဲမှာ ပျင်းရိနေမယ့် Dota2ပရိသတ်တွေအတွက်တော့ သတင်းကောင်းတစ်ခုရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပါပြီ။
2019-2020 DPC Season ရဲ့ ဒုတိယမြောက် Bukovel Minor ကိုတာဝန်ယူကျင်းပပေးခဲ့တဲ့ WePlay! က Region အစုံက Dota2အသင်းကြီးတွေပါဝင်မယ့် အွန်လိုင်းပြိုင်ပွဲကြီးကို ကျင်းပတော့မှာဖြစ်ကြောင်း သိပ်မကြာခင်ကပဲ ကြေညာလိုက်ပါတယ်။
လက်ရှိကမ္ဘာ့အနှံ့အပြားမှာ ကူးစက်ပြန့်ပွားလျက်ရှိတဲ့ COVID-19 ကိုတိုက်ဖျက်ရာမှာ ရန်ပုံငွေရှာဖွေပေးဖို့အဓိကရည်ရွယ်ပြီး ပြိုင်ပွဲနာမည်ကိုတော့ WeSave! Charity Play လို့နာမည်ပေးထားပါတယ်။
WeSave! Charity Play ပြိုင်ပွဲဟာ အခြားပြိုင်ပွဲတွေလိုမဟုတ်ဘဲ Region ၆ ခုကို တစ်ခုချင်းစီခွဲပြီး ယှဉ်ပြိုင်စေမယ့် ပြိုင်ပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ Region တစ်ခုကို ၄ သင်းနှုန်းနဲ့ စုစုပေါင်း ၂၄ သင်းစာလျာထားပြီး လောလောဆယ် ယှဉ်ပြိုင်ဖို့အတည်ပြုထားတဲ့ အသင်းဟာ ၁၄ သင်းအထိရှိပြီလို့သိရပါတယ်။ အဲဒီအသင်းတွေကတော့ -
Europe – Team Secret, Nigma, Team Liquid
CIS – Virtus.pro, HellRaisers
SEA – TNC Predator, Geek Fam, BOOM Esports
China – EHOME, Invictus Gaming
South America – beastcoast, No-ping Esports, Thunder Predator
North America – Business Associates
WePlay! ဘက်ကနေ Region တစ်ခုချင်းစီအတွက် ဒေါ်လာ ၂၀၀၀၀ စီနဲ့ Region ၆ ခုစာ ဒေါ်လာ ၁၂၀၀၀၀ ကို ဆုကြေးအဖြစ်ချီးမြှင့်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ WeSave! Charity Play ပြိုင်ပွဲကို မတ်လ ၂၀ ရက်နေ့ကနေ ၂၆ ရက်နေ့အထိ ၇ ရက်တိုင်တိုင်ကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီး Twitch ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Twitch Viewer တွေလှူဒါန်းတဲ့ ငွေကြေးတွေ၊ ပြိုင်ပွဲတွင်းကြော်ငြာထည့်သွင်းရာက ရရှိတဲ့ငွေကြေးနဲ့ Sponsor ကုမ္ပဏီတွေကရရှိတဲ့ငွေကြေးတွေကိုတော့ COVID-19 တိုက်ဖျက်ရာမှာအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။